Munhenga Zvinoreva MuBhaibheriRudo Uye Dziviriro - Zvinoreva Zvemubhaibheri
iphone 6 mune dfu modhi
runhare runoti ndine hutachiona
bluetooth yangu inoramba ichitenderera
sei foni yangu ichiti hapana sim iphone
Nhenga Zvinoreva MuBhaibheri?
Wakawana here minhenga uchifamba? Kana zvirizvo, iyo ngirozi vari kutumira mameseji kuhupenyu hwako. Usagare usingazive zvavanoda kukuudza. Pano tinotsanangura zvinorehwa neminhenga yengirozi.
Ngirozi dzichakuunzira minhenga kuti ikuratidze kuti hausi wega . Nyanzvi dzinoti dzakanangana zvakananga nekufunga nemunamato nekuti zvinobva kune vechiedza.
Mutsika dzakawanda minhenga inomiririra iyo Humwari . VaIjipita vakavabatana navo mwarikadzi wechokwadi , muBhaibheri dzinomiririra rudo uye kudzivirirwa . Ipo maMayan, maAztec nevanhu veko vanozvibatanidza nehungwaru.
Chokwadi ndechekuti kunyangwe ngirozi dziine mapapiro ekubhururuka, minhenga inoreva kugona kuita kuda kwaMwari.
Scott Cunningham , mune yake
Vakuru vekuAmerica vakashandisa minhenga mumisoro yavo kumiririra kutaurirana kwavo nenyika yemweya, uye vakatenda kuti kutsvaga minhenga chiratidzo chekutanga nyowani uye kuberekwa patsva kwemweya.
MaCelt maDruid vaipfeka nguvo dzakashongedzwa neminhenga kuti vakunde ndege chaiyo uye vawane ruzivo rwekudenga kumatunhu emweya.
MuBhaibheri , minhenga inomiririra kuchengetedzwa kwekufananidzirwa uye kudzivirirwa.
Mukufananidzira kwezviroto , minhenga inoreva kugona kufamba zvakasununguka muhupenyu hwese.
Saka zvinorevei chinyoreso? Iwo manhenga anomiririra kutanga kutsva mupfungwa yemweya, pamwe nechokwadi, kumhanya, rudo, kureruka uye kubhururuka.
Kwandiri, minhenga chiyeuchidzo chakanaka chekuteerera. Kana iwe ukawana peni uye ukasimudza kuziva kwako, zvinowanzo kuve nyore kwazvo kugadzirisa kune iyo ruzivo rwezvinoreva.
Unogona kuwana peni kana iwe uchifunga nezvekuchinja kana kunetseka nezve chimwe chinhu. Zvakare, unogona kusanganisa chinyoreso nechimwe chinhu panguva yacho kana uchichiwana.
Ngirozi dzinoda kuti ubvunze rubatsiro rwavo
Minhenga inogona zvakare kuve chiyeuchidzo chakareruka chekuti ngirozi dzako dziri padyo, uye ivo vanoda kuti iwe uzive. Vanoda kuti ubvunze rubatsiro rwavo.
Kunyangwe vatumwa vakagara vari padhuze, vanokudza zvakadzama rusununguko rwako rwekusarudza uye havapindire kunze kwekunge wakumbirwa. Kumbira rubatsiro kubva kungirozi kana uchichida!
Iko hakuna kukumbira kwakakura kwazvo kana kudiki kwazvo, uye haugone kukumbira rubatsiro kazhinji. Ipo chikumbiro chako chakanangana nekuda kwaMwari, uye nekuda kwekunakira kukuru kwevose vanobatanidzwa, ngirozi dzichashanda kuseri kwezviitiko kuti zvikubatsire.
Nguva inotevera paunowana peni, ishandise sechiyeuchidzo chekuti ngirozi dzako dzinemi. Kana iwe ukasawana minhenga, usazvidya moyo, ngirozi dzako dzinogona kusarudza chimwe chiratidzo ... Ingo teerera.
Iwe unoda kutsvaga minhenga here? Chimbofunga kana kuti uti: Ngirozi, ndingade chiratidzo chekuvapo kwako. Ungandibatsira here kuwana chinyoreso? Dzimwe nguva, chinyoreso chichaonekwa nenzira yekufananidzira. Semuenzaniso, rimwe zuva ndakakumbira ngirozi kuti dzindibatsire kutsvaga chinyoreso, uye zuva risati rapera ndakaona mukadzi aive akadhonza mapapiro engirozi kumusana kwake.
Ingo teerera uye wedzera kuziva kwako kwenguva iripoyi kuti ucherechedze kune chaicho chirevo icho chinyoreso chemutumwa chine iwe panguva iyoyo.
Kuzivikanwa kweiyo chena feather
Iwo manhenga ane hukama hwakasimba nenzvimbo dzemweya. Saka nei kufarirwa kweiyo chena feather?
Zvinonzwisisika kuti minhenga chena ndiyo inonyanya kuzivikanwa, sezvo chena chiratidzo chakajairika chekuchena, chinoenderana zvakanyanya nezvinoreva ngirozi.
Zvimwe zvezvinowanzo rehwa kana uchinge wawana chena feather ndeaya:
Mhenga chena inounza chiyeuchidzo chakareruka chekuti ngirozi dzako dzinewe dzinokuda uye dzinokutsigira kubva kuMweya.
Minhenga chena inogona zvakare kuve chiratidzo chevatumwa kuti vadikani vako vakasimba uye kuti vakabudirira kuyambukira munzvimbo dzemweya.
Minhenga chena inomiririra kuchena, kupenya uye kuti unodiwa, unotungamirirwa uye unochengetedzwa…
Muchena mucherechedzo wekutenda uye kudzivirirwa, uye kana iwe ukawana minhenga chena munzvimbo dzakasarudzika, meseji inonyanya kukosha.
11 mavara enhenga yengirozi uye zvazvinoreva kana iwe ukazviwana
Kune ruzivo rwakawanda nezve minhenga chena, asi muchokwadi ngirozi dzinoshandisa minhenga yemhando dzose, mavara uye saizi kuti utarise.
Heano kutarisa nekukurumidza pane zvimwe zvekuwedzera zvinoreva izvo mamwe manhenga ane ruvara angave nawo.
Kutsvaga iyo minhenga yepingi chiyeuchidzo cherudo rusina mugumo rwevatumwa vako uye chiyeuchidzo chekusingaperi kurudziro inowanikwa kana iwe wakagadzirirwa kuda.
Kutsvaga mhete tsvuku zvinoreva simba rakakosha, simba, hutano hwemuviri, kugadzikana, simba, shungu uye ushingi.
Kutsvaga peni yeorenji kunotakura meseji yekusika, kuteerera kune rako remukati izwi uye kugara une tariro kukwezva kubudirira.
Kuwana yero minhenga kazhinji chiyeuchidzo chekufara, kuvapo, kusvinura uye kutarisisa pane izvo zvaunoda magnetize aya maropafadzo muhupenyu hwako.
Minhenga yakasvibirira inoreva kuwanda nemari, mukana wakaorera, pamwe nehupenyu hwakanaka, hutano uye rudo.
Minhenga yebhuruu inopa inozorodza uye ine rugare simba, uye yakabatana nekutaurirana, kuziva uye, kazhinji, chiyeuchidzo chekuteerera.
Minhenga grey ndeyekufona kuti udzokere murunyararo rwemukati kuti ugadzire kunze. Grey haina kwayakarerekera uye inogona kuve chiratidzo chekuti mhinduro kumubvunzo wako haisi nyore hongu / kwete kana kuti zvese zvinhu nhema / chena.
Minhenga yeBrown inoreva kugadzika, hupenyu hwepamba uye kugadzikana. Iko kune simba reruremekedzo, rakadzika pasi positivity uye muyero pakati penyama newemweya.
Kuwana minhenga mitema chiyeuchidzo chekudzivirirwa kwengirozi dzako uye chiratidzo chekuti huchenjeri pamweya nemashiripiti zvinowanikwa mukati.
Minhenga ane ruvara rwepepuru
Iwo manhenga ane ruvara rwepepuru anotakura mameseji ezvakadzama zvemweya, kutapurirana kwekusagadzikana, pamwe nekuvhurwa kwechiratidzo chepfungwa uye pamweya.
Nhema uye chena minhenga inoreva
Kutsvaga minhenga pamwe nekubatanidzwa kwevatema uye chena kazhinji chiratidzo chekuti shanduko dzakakosha (kana dzave kutoitika) dzichakurumidza kuitika muhupenyu hwako. Vimba kuti unotsigirwa uye kuti shanduko dzinoitika dzinoenderana nezvako zvakanaka, uye zviri kupa kurapa kukuru, kukura pamweya uye kuenderana nechokwadi chako chepamusoro soro.
Nhenga nhema uye chena zvinorevawo kusarerekera kwaMwari. Panzvimbo pekubatwa nehuviri uye kutonga zvinhu sezvakanaka kana zvakaipa, tendera izvo zvaunofanirwa kunge uri.
Kutaridzika, minhenga ine nhema uye chena inotiyeuchidza nezveyero pakati pechiedza nerima, uye inoda kuti isu tibatanidze zvikamu zvemumvuri kuti zvive zvakakwana uye zvakabatana zvisikwa.
Nhema nhema uye chena minhenga inomiririra kubatana, pfungwa yekubatana, uye inounza chiyeuchidzo chekuti ngirozi dzinokuda uye dzinokutsigira iwe paunenge uchiita shanduko dzakakosha muhupenyu hwako.
Tsvaga meseji chaiyo yeminhenga
Zvese zviri pamusoro kutarisa kwakazara pane zvazvinogona kureva kuwana minhenga ine mavara. Iwe unowana inoreva zvakadzama yeshoko rengirozi nekuteerera uye kutarisa mukati.
Chinhu chakanaka chekutsvaga minhenga ndechekuti ngirozi dzinozozvimisikidza munzira yako panguva chaiyo kuti ikupe kusimbiswa kana zviyeuchidzo nezvemhinduro kumubvunzo iwe wabvunza, kana ivo vanokukurudzira iwe kutevedzera nzira kwayo.
Nechikonzero ichocho, usazvidya moyo zvakanyanya pamusoro pezvinoreva , ingova wakavhurika. Kana paine chimwe chinhu chakatarwa icho ngirozi dzinoda kuti iwe uzive, zvichaonekwa. Chinhu chakanaka pamusoro peshumiro dzevatumwa ndechekuti dzinodzokororwa kusvikira iwe wadzinzwisisa, saka kana ukapotsa kekutanga, ivo vanokutumira iwo meseji neimwe nzira.
Kumbira ngirozi dzako kuti dzikubatsire kuwana zvinoreva peni. Vimba zvaunonzwa uye chinhu chekutanga chinouya mupfungwa dzako. Zvirokwazvo, icho chichava icho chaicho chirevo chekutsvaga peni munzira yako.
Tsvaga minhenga pasi… Unofanira kuinhonga here?
Hapana nzira yaunoda kuti usimudze peni kuti uzive meseji, nhungamiro uye kuvapo kwengirozi kwainoyeuka.
Kuwana minhenga mukati mako chikomborero uye chiratidzo chekuti ngirozi dzako dzinemi.
Shandisa iyo nguva yaunowana peni sechiyeuchidzo kuti uvepo zvakare, uye tenda vatumwa nekuvapo kwavo uye nerubatsiro muhupenyu hwako.
Ini pachangu handimbonhonga zvinyoreso zvakawanda zvinoonekwa munzira yangu… Kunyangwe ndichiwanzozvitora!
NDINGAZIVA SEI KUTI KANA NDAKAWANA NGIROZI VABABA?
Zviri nyore kwazvo kuziva kana iwe ukawana chinyoreso chinouya kubva kungirozi nekuti uropi hwako hunozozviziva uye kuti matambudziko kana mufaro urikupfuura noupenyu hwako zvinouya mupfungwa dzako.
Ngirozi dzichapindura zvikumbiro zvedu sekureba sekunge izvo zvatinokumbira zvakanaka, hazvikuvadze chero munhu kana kukanganisa chirongwa chedu cheMweya.
Vakagadzirira kutibatsira kugadzirisa matambudziko makuru uye kutiswededza padyo nePamusoro Pedu, wedu weMweya kana Wechokwadi Munhu.
Sei vatumwa vachishandisa minhenga sezviratidzo?
Hukama hweminhenga nengirozi
Icho chirevo chekufananidzira cheminhenga
JEHOVHA TSIDKENU: Zvinoreva uye Kudzidza Bhaibheri
Chiporofita Uye ZveMweya Zvinoreva zveCricket
Chii Chiri Chirevo CheMhumhi Symbolism MuBhaibheri?
Chii Chinonzi Dombo reOnyx Rinoreva Mubhaibheri?